(32) Camera Angle ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၃၂)
ရှုဒေါင့် အမျိုးမျိုး မှ နေ၍ ရိုက်ကူးခြင်း
Camera Shooting Angle နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်၏ အချို့သော မှတ်စု များတွင် တစ်စွန်းတစ်စ ရေးသားခဲ့ဘူး ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤ အရေးကြီးသည့် အကြောင်း အရာ တစ်ခု သီးခြားရေးသားရန် ကျန်နေသေး သည်ကို သတိမပြုမိခဲ့ပါ။ ဓါတ်ပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ စုဆောင်းထားသည့် မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ ၏ စာပုံ အောက် တွင် နစ်နေခဲ့ပါသည်။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် အရေးကြီးသည့် အချက် တစ်ရပ်ကို လစ်ဟာ စေခဲ့ပါသည်။
သို့သော် မိတ်ဆွေ လူငယ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ တောင်ကိုရီးယားမှ Ko Kaung Latt Aung က ၄င်း၏ ပုံ တစ်ပုံတွင် -
“ အန်ဂယ် ကောင်း တခုကို ရ ဖို့ အတွက် ဒူး ဘဲ ထောက်ရ ရ ကုန်းကုန်းကွကွ နဲ့ ပဲ ရိုက် ရ ရ … လှဲ ချလိုက်ဘို့လည်း အကျွန်နုပ် ဘယ်တုန်းကမှ ၀န်မလေး ခဲ့ပါ…. ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ၊ ဒီ စကားမှန်ပါက Web Cam နဲ့ ရိုက်တောင် ပုံကောင်း ထွက်ပါစေသား …. ခွိ ခွိ .. “
လို့ ရေးထားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ သူကတော့ နောက်သည့် ပုံစံ ကလေး ဖြင့် ရေးခဲ့စေကာမူ အဆိုပါစကားသည် အလွန်မှန်သည့် စကားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် လစ်ဟင်း နေသည့် အပိုင်းကို ပြန် ကြည့်ရန် စေ့ ဆော် လိုက် သကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါသည်။ သို့ နှင့် ဤ မှတ်စုလေး ရေး ဖြစ်လိုက်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် မည်ကဲ့ သို့သော Angle က ရိုက်သည် ဆိုသည့် My Angle ဆိုသော စကားရပ်ကို ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် “ ရိုးရိုးလေး ပြောရ ရင်..ဘယ်နေရာ ကနေပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်သလဲဆိုတဲ့ နေရာ နဲ့ Subject တို့ ရဲ့ အနေအထားပါဘဲ ။ “ လို့ အဓိပ္မါယ် ဖွင့် ထားသည်ကို တွေ့ ခဲ့ ရပါသည်။ များသော အားဖြင့် ဓါတ်ပုံ အပျော်တန်း ရိုက်သူ လူသစ် များ အနေနှင့် မတ်တပ် ရပ် ကာ Subject အား မျက်နှာ မူ၍ ခလုပ် နှိပ် လိုက်သည်က များကြပါသည်။
နေရာပြောင်းကြည့် ခြင်းကို အနီးဆုံး ဥပမာ ပေးရပါလျှင် ကွန်ပြူတာ စာပွဲတွင် ထိုင်ကာ ကြည့်ရိုးကြည့်စဉ် ပုံစံဖြင့် ကွန်ပြူတာကို ကြည့်နေရာကနေ မတ်တပ် ရပ်ကာကြည့်လိုက်ပါ။ မြင်ကွင်းသည် မြင်နေကြ မြင်ကွင်း မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်မျိုး ထူးခြားလာပါ လိမ့်မည်။ ယင်းနောက် ထိုင်နေသည့် ကုလားထိုင် ပေါ်တွင် မတ်တပ် ရပ်ကာ အပေါ်စီးမှကြည့်ပါ။ ထိုအခါ စာပွဲ ပေါ်ရှိ ကော်ဖီ ခွက် ၊ ဘောလ်ပင် ၊ မှတ်စု စာအုပ် စသည်တို့ပါ ပါလာကာ ပို၍ ထူးသည့် မြင်ကွင်း တစ်ရပ်ကို မြင် လာရပေမည်။
ထို့နောက် ပြန်ထိုင်ကာ စားပွဲနှင့် မျဉ်းတပြေးတည်း (Level) မှပြန်ကြည့်ပါ။ ယင်းနောက် အောက် သို့ နည်းနည်း လျှော ထိုင် ကာ ပြန်ကြည့် ပါ။ နေရာ အမျိုး မျိုးမှ နေ၍ မတူညီ မြင်ကွင်း အမျိုး မျိုး ကို မြင်ရပေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရာ ၀ထ္ထု တစ်ခု ထဲကိုပင် နေရာ အမျိုးမျိုး မှ နေ၍ ကြည့် ခြင်း ဖြင့် ထူးခြားသစ်လွင်သည့် မြင်ကွင်း အမျိုးမျိုး အဖြစ် မြင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဥပမာကို ဓတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် အသုံးပြုပါက ပုံမှန် ငြီးငွေ့ဘွယ်ရာ မြင်ကွင်း မှနေ၍ ဖေါက်ထွက် သွားနိုင် ပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါ နမူနာ ပုံကို အိန္ဒိယ ရှိ Taj Mahal တွင် အောက် မှ ပင့် ကာ ရိုက်ကူး ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ လမ်း ပေါ်တွင် လူကို ပက်လက် လှန်ကာ ရိုက်ကူး ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ပုံကို နမူနာထားကာ စိတ်ကူးကွန့်မြူး ၍ အလားတူ အခြားသော စိတ်ကူး သစ်များ ပွား များနိုင်ပါလိမ့် မည်။
Taj Mahal ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ လှည့် ခရီးသည် များပြားလှသည့် နေရာ၏ လမ်းပေါ်တွင် ပက်လက် လှန်နေရာမှ စိတ်ကြိုက် Subject တွေ့ သည် အချိန်တွင် ကင်မရာ ခလုပ် နှိပ် လိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ပုံမှာ မူ Taj Mahal ပုံ နှင့် ဆန့် ကျင်ဘက်အဖြစ် အထက် စီးမှ ရိုက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုက် ရိုးရိုက်စဉ်မှ ခွဲ ထွက်ကာ အမြင် ဆန်း စေရန် ဤ ကဲ့ သို့ ရိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ခလေးပုံ မှာ မူ ရိုက်ရိုး ရိုက်စဉ် ပုံစံ အတွင်း မှာပင် ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ သည်။ သို့သော် ခလေး ငယ် လေးဘက်ထောက် နေသည့် အချိန် တွင် သူ၏ မျက်စေ့ Level အတိုင်း ဖြစ်စေရန် ၀မ်းလျှားထိုးမှောက်ကာ ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ဤ နည်းသည် ခလေးငယ်များကို ရိုက်ရာတွင် အကောင်းဆုံး နည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထူးခြားသည့်မြင်ကွင်း ဖန်တည်းရေး အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် နည်းလမ်း အသွယ်သွယ် ကို အောက်ပါအတိုင်း အကြံ ပြု ထားပါသည်။
၁။ Lower Perspective ရစေရန် ထိုင်ချလိုက်ပါ။
ထိုင်ချလိုက်ခြင်းဖြင့် အမြင်ဆန်းသည့် မြင်ကွင်း ရလာ ပါ လိမ့် မည်။ လူ ၊ သစ်ပင် စသည်တို့သည် မိမိကို မိုးနေ သည့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်လာ ပါလိမ့် မည်။ ဤသို့ဖြင့် Overbearing Feeling ဖြစ်သည့် အထက်မှ လွမ်းမိုးနေသည့် ထူးခြားသော ခံစားမှု မျိုး ရှိသည့် ပုံ မျိုး ရနိုင်ပါသည်။
၂။ အမြင့် သို့ တက်ပါ။
အထူးသဖြင့် ရှုခင်းများရိုက်ရာတွင် ရင်သပ်ရှုမောဘွယ်ရာ မြင်ကွင်းများဖြစ်သည့် Panorama View နှင့် Rolling Landscape View များ ရနိုင်စေရန် အနီးရှိ တောင်ကုန်းသို့ မဟုတ် မျှော်စင်များပေါ်မှ တက်၍ ရိုက်ရန်လိုပါသည်။ လူများ ကိုလည်း အထက် စီး မှ ရိုက် မိုး၍ ရိုက်ခြင်း ဖြင့် ထူးခြားသည့် မြင်ကွင်း ရ နိုင်ပါသည်။
၃။ ပင်လယ်ပြင် ဘက်သို့ ထွက်ပါ။
အများစု သည် ကမ်းခြေ ပေါ်မှ နေ၍ပင်လယ် ရေပြင်ကိုသာ ရိုက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ထူးခြားသည့် မြင်ကွင်းရ စေရန် ပင်လယ် ဘက်သို့ သွားပါ။ ရေစပ်မှ နေ၍ ကမ်းခြေ ကို အခြားသူများ ရိုက်လေ့ ရိုက်ထရှိ သည့် ရိုက်ချက်၏ ပြောင်းပြန်အဖြစ် ပြန်ရိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင် ပါက လှေ စီး ကာ ရေပြင် သို့ ထွက်ပြီး ရေပြင်ထဲ မှကမ်းခြေကို ပြန် ရိုက်ပါ။
ကမ်းခြေ မှနေ၍ှရေပြင်သို့ သမားရိုးကျ ရိုက်ထားသည့် ပုံ။
ရေစပ်မှနေ၍ ကမ်းခြေကို ပြန် ရိုက် ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ရေအောက် တွင် ရိုက်ပါ။
ဤသည်မှာ လည်း ထူးခြားသည့် ရိုက်ကွက် ဖြစ်ပါသည်။ ရေငုတ် ၀တ်စုံ ၀တ်ကာ ရေငုတ်၍ ရိုက်ရမည် ဟု မဆိုလိုပါ။ ရေအောက် ရိုက်နိုင်သည့် ရေလုံ ကင်မရာ ဖြင့် ရေ ကူးကန် သို့မဟုတ် ကမ်းခြေ ရေတိမ်ပိုင်း စသည်တို့ ၌ ရေအောက် တွင် ရိုက် သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။
၅။ လှေကား ငယ် တစ်ခု ဆောင်ထားပါ။
လှေကားငယ် သို့မဟုတ် ခေါက်၍ သယ်ဆောင်ရလွယ်သည် ခုံ စသည် တို့သည် အထူး သဖြင့် လူများ လှသည့် လူ အုပ်အတွင်း မှ ရိုက်ရသည့် အခြေအနေ မျိုးတွင် အလွန် အသုံးဝင်ပါသည်။ လူအုပ်အတွင်း၌ အများ၏ ဦးခေါင်းများကို ကျော်ဖြတ်ကာ ရိုက်ကူးရန် လိုပါသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း လူအုပ်အတွင်း ညှပ်ကာ ပိတ်မိနေပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်၍ မရသည့် အခြေအနေမျိုး နှင့် ကြုံခဲ့ဘူးပါသည်။ အချို့ ၀ါရင့်ဓါတ်ပုံဆရာများမှာမူ လှေကားငယ် အလေးများအပေါ်မှ နေ၍ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ကာ ရိုက်နေကြသည်ကို မြင်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ လှေကားဖြင့် အထက်စီးမှ ရိုက်သည့်အတွက် သာမန်ထက် ထူးသည့် Angle လည်းရ နိုင်ပါသည်။
၆။ ကင်မရာကို အထက်သို့မြှင့်၍ ကိုင်ကာ ရိုက်ပါ။
ဤ နည်းသည်လည်း လှေကား နှင့် ရိုက်သည့် နည်းကဲ့သို့ ပင် အတော် အသင့်သော အထက်စီးမှ ရိုက်နိုင်သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အထောက် အကူမှ မရှိသည့် အချိန်တွင် ကင်မရာကို လက်ဖြင့် မြှောက် ကာ ရိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။ မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် ရိုက်ပါ။
ရှုခင်းများရိုက်ရာတွင် မြင်ကွင်းကိုသာမန် ရိုက်နေကျ ၄x၆ ပုံ အချိုး ထက် မြင်ကွင်း ပို၍ ကျယ်သည့် Panorama ပုံ မျိုး ရိုက်သင့်ပါသည်။ ကင်မရာ တွင် Panorama Mode ပါရှိပါက Panorama Mode ကို Set လုပ်ပြီး ရိုက်ပါ။ သို့ မဟုတ်ပါက ရိုက် ပြီး မှပုံ များကို Panprama အဖြစ် ပြန် ပေါင်း နိုင်ပါသည်။
၈။ လူကို လှဲ ချ လိုက်ပြီး ရိုက်ပါ။
အနည်းငယ် ရယ်စရာကောင်းသည့် ရိုက်နည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အလွန် အံ့ဘွယ်ရာ ကောင်းသည့် ရလဒ်ကို ရနိုင်သည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။ ခက်သလောက် တန်ဘိုး လည်းရှိ သည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းတွင် Aperture ကို ကျဉ်းကျဉ်း ထားကာ Depth of Field ကို အများဆုံး ရအောင် ယူ ရပါမည်။ ပက်လက် လှန်ကာ Subject ၏ ခြေဖ၀ါးကို ရိုက်လျှင် ၄င်း၏ မျက်နှာပါ ပြတ် နေမည့် DOF ယူရပါမည်။ Use your stomach not your head ဆိုသည့် ဗိုက် ကိုမြေပြင် ပေါ်တွင် မှောက်ကာ ရိုက်သည့် နည်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြေ အနေပေါ် မူ တည် ကာ ပက်လက် လှန် ၍ လည်း ရိုက်နိုင်ပါသည်။
၉။ ရောင် ပြန် (Reflection ) ကိုသုံးပါ။
ရှုခင်းများရိုက်ရာတွင် ရိုက်ရိုး ရိုက်စဉ်ထက် ရေပြင်ပေါ်တွင် ထင်နေသည့် ရောင်ပြန်ပုံကို ရိုက်ခြင်းဖြင့် အမြင်ပို၍ဆန်းစေပါသည်။ ရေအိုင် ရေကွက် ငယ်များ အတွင် ထင်နေသည့် လူ သို့ မဟုတ် သတ္တ၀ါ များ၏ ရောင်ပြန် အရိပ်၊ မှန် သို့ မဟုတ် သတ္တု ပြောင် တို့ မှ အရောင်ပြန်နေသည့် အဆောက်အအုံအသစ် တို့ တွင် ပေါ်နေသည့် ရောင်ပြန်အရိပ်များ သည် ထူးခြားသောမြင်ကွင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ရေပေါ်တွင် လေတိုက်သဖြင့် လှုပ်နေ သည့် ရေ ဂယက်ပေါ်တွင် ပေါ်နေသည့် အရိပ် သည် ပို၍ ထူးခြားပါသည်။
၁၀။ Subject ၏အောက်မှ ပင့် ရိုက်ခြင်း။
ကင်မရာကို မြေပြင်သို့ နှိမ့်ချကာ အထက်သို့ ပင့်၍ ကောင်းကင်ပြင်ကို မျက်နှာပြု ပြီး ရိုက်သည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ နည်းဖြင့် ပန်းများကို ရိုက်ပါက ပန်းသည် ကင်မရာ Lens ပေါ်တွင် မိုးနေပြီး အပြောကျယ်လှသည့် နောက်ခံ ကောင်းကင်ပြင် ကြီးကို နောက်ခံ အဖြစ်ရနိုင်သည့် ထူးခြားသောမြင်ကွင်း ရစေနိုင်သည့် နည်းဖြစ် ပါသည်။
၁၁။ ဒူးထောက် သည့်အနေအထား။
ဒူးတစ်ဘက်ကို ထောက်ပြီး ကင်မရာကို အထက်သို့ အနည်းငယ် မြှင့်ပြီးရိုက် ကြည့်ပါ။ ပုံ မှန်အနေအထားထက် ထူးခြားသည့်ပုံ ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ခံသည် မလိုလား အပ်သည့် နောက်ခံများမပါဘဲ အနှောက်အယှက်ကင်းသည့် ကောင်းကင်ပြင်သာ ရှိနေစေသည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ဆိုင်ကယ် စီးသည့် ပုံကိုမူ ပက်လက် လှန် အနေအထားဖြင့် ရိုက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ အထက်စီးမှ ရိုက်ခြင်း။
အထက် စီးမှ မိုး၍ ရိုက်ခြင်း သည်လည်း နောက် ခံ အနှောက် အယှက် ကင်းစေပြီး အမြင် ဆန်းသည် မြင်ကွင်း ရနိုင်ပါသည်။
၁၃။ ကင်မရာကို စောင်း၍ ရိုက်ခြင်း။
ဤ နည်းကို အချို့ သော ပညာရှင် များ က နှစ်သက်မှု မရှိသည့် အတွက် ၀ိဝါဒ ကွဲ နေသော ရိုက် နည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ရာတွင် အချို့ သော ပညာ ရှင်များကမူ Angle ပို ကျယ်ကျယ် ရနိုင်သည့် ရိုက်ချက် ဟု ဆိုပါသည်။ မည်သို့ ပင် ဆိုစေကာ မူ ဆန်း ကျယ် သည့် မြင်ကွင်း တစ်မျိုး ရနိုင်ပါသည်။
Camera Angle မျိုးစုံ ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် နမူနာ ပုံများ။
ဤ ကဲ့သို့ Angle မျိုးစုံ ဖြင့် ရိုက် ခြင်း ဖြင့် ကမ္ဘာ ကြီးကို ကြည့် ရိုးကြည့်စဉ်မှ မဟုတ်ဘဲ ဒေါင့်မျိုးစုံ မှ ပို၍ လှပစွာ ကြည့် မြင် နိုင်စေမည့် နည်း လမ်း များဖြစ် သည် ဟု ဆိုရပါမည်။
Posted by Soe Hlaing at 06:22
Kyaw Thu9November 2013 at 08:42
ဒီ ပိုစ့်လေးကြောင့် အသိပညာ အသစ်.. အမြင်အသစ်တွေ သိရှိလာတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.
yezinaung 17 May 2016 at 03:53
ဖတ်ရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ် ဆရာ
thantunoo 20 February 2017 at 18:48
Aung Sis the 29 November 2017 at 06:24